Sawirro:- Xawaaladda Amal Oo Lacag Ugu Deeqday Qaxotiga. – SBC
Sawirro:- Xawaaladda Amal Oo Lacag Ugu Deeqday Qaxotiga.
Posted by SBC Editor on May 20, 2015 Comments
Xafladan oo lagu qabtay Boosaaso ayaa ahayd wareejinta Lacag dhan 20-kun oo Dollar oo ay Shirkada Xawaalada Amal ay ugu talagashay taakuleynta Soomaalida iyo Dadka kale ee ka imaanaya Dalka Yemen oo ay ka jiraan Colaado.
Xaflada Wareejinta Lacagtan waxaa Goobjoog ka ahaa Culimada Puntland Maamulka minhaaj Gudiga Gurmadka iyo Masuuliyiinta Shirkada Lacagtan wareejineysay ee Amal waxaana ay dhamaantood isla Qireen inay tahay Talaabo muhiim ah oo ku dayasha Mudan in Lacag Kaasha ah lagu deeqo
ugu horeyn waxaa ka hadlay Madasha Proff Sicid Cali Shire Gudoomiyaha Shirkada Amal ee Soomaaliya kana hadlay ujeedka ay kulankan.
Sheekh Daahir Aw-Cabdi iyo Sheekh Maxamed Macalin Axmed ayaa dhankooda ka hadlay Xaflada ay shirkada Amal ku wareejineysay Lacagtan deeqda ah iyaga oo ka mahadceliyay una duceeyay Shirkada iyo Mulkiilayasheeda.
Ugu danbeyntiisa waxaa Lacagtan la kala wareegay Shirkada Amal Masuuliyiinteeda Mu’asasada Minhaaj ee Dacwada iyo Horumarinta iyo Gudiga Gurmadka Qaxootiga Yemen ka imaanaya ee Soo gaaraya Magaalada Boosaaso Iyadoona la filyo in lacagtan ay qeyb ka noqon doonto Ambabaxinta Dadka Imaanaya ee Cusub.